Buugaagta Maaliyadeed ee Shaqsiyeed ee ugu Fiican Bilowga - Goobta Hantida
Bogga ugu weyn Buugaagta Maaliyadda Shaqsiyeed ee Ugu Fiican Bilowga
Buugaagta Maaliyadda Shaqsiyeed ee Ugu Fiican Bilowga
isha sawirka: waqtiga lataliyaha xiga
Waa maxay Buugga Maaliyadda ee Shakhsi ahaaneed?
Ma u baahanahay Buug Maaliyadeed oo Shakhsi ah?
Maxay yihiin Buugaagta Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee ugu Fiican Bilowga?
#1. Maxay Dugsigan Wax iigu Bar Waayeen?
#2. Aabbe Taajir Aabbe Miskiin
#3. Isugeynta Lacagta
#4. Milyaneerka otomaatiga ah
#5. Millennial Broke
#6. Qorshaha Maaliyadeed ee Hal-Bogga ah
#7. Waxaan Ku Barayaa Inaad Taajir Noqoto
#8. Maaliyadda Gabadha xariif ah
#9. Cilmu -nafsiga Lacagta
#10. Lacagtaada ama Noloshaada
#11. Milyaneerka Albaabka Xiga
#12. Korinta Carruurta Taamsan Dhaqaale ahaan.
#13. Maalgaliyaha Caqliga Badan.
#14. Dumarka Caqliga Badan Waxay Jecelyihiin Lacagta.
#15. Xoriyadda Maaliyadeed
Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo Buugaagta Maaliyadeed ee Ugu Fiican ee Bilowga ah
Barashada dhaqaalahaaga ma aha shaqo maalmeed. Waxaa jira habab kala duwan oo aad ku baran karto dhaqaalahaaga. Waxaad wax ka baran kartaa dhaqaalahaaga shaqsiyeed adoo adeegsanaya aaladaha internetka, baloogyada, dugsiga, podcasts, iyo buugaag.
Marka laga hadlayo barashada maaliyaddaada gaarka ah iyada oo loo marayo buugaag, hubi inaad akhrido buugaag ay qoreen khubaro ku saabsan maaliyadda shaqsiga. Waxaad ka akhrisan kartaa waayo-aragnimadooda waxaadna ka baran kartaa casharro noloshaada dheer.
Markaad akhrido talooyinka khubarada iyo barashada khibradaha dadka kale, waxaad heli kartaa faham qoto dheer oo ku saabsan mawduucyada maaliyadeed ee shaqsiyeed ee kala duwan. Maqaalkani wuxuu ku bari doonaa sababta aad ugu baahan tahay inaad akhrido buugaag la xiriira maaliyadda shaqsiyeed iyo buugaagta shaqsiyeed ee ugu fiican ee aad akhrin karto bilow ahaan.
Buugga maaliyadeed ee shaqsiga ah waa buug kaa caawinaya inaad si fiican u maareyso dhaqaalahaaga. Waxay ku baraan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato khibradaha dadka kale. Markaad akhrinayso buug maaliyadeed shaqsiyeed, waxaad baran doontaa sida ugu fiican ee aad u maamuli karto lacagtaada, iska ilaali deynta, u qorshayso hawlgabkaaga, oo aad weli u haysato lacag firaaqo ah ujeeddooyin degdeg ah.
Markaad akhrinayso buug shaqsiyeed, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato faahfaahinta oo aad sida ugu fiican uga hesho waxa aad ka rabto buugga.
Markaad ogaato dhaqaalaha shaqsiyeed, waxaad ogaan doontaa sida loo maareeyo loona bixiyo deymaha. Waxa kale oo aad noqon doontaa qof caqli badan oo kalsooni badan ku qaba sida aad u maareyso lacagtaada.
Hoos, waxaan ku qori doonnaa buugaagta maaliyadeed ee ugu fiican kuwa bilowga ah.
Iskuulka dhexdiisa, wax yar baa lagu bari doonaa maareynta dhaqaalahaaga. 'Miisaanka badbaadinta' ee uu qoray qoraagu wuxuu ka kooban yahay su'aalo taxane ah oo ardayda wax ka weydiinaya caadooyinkooda kaydka.
Qiimaha celceliska miisaanka kaydka ayaa ka kacay celcelis ahaan 24.28 ilaa 26,78, taas oo loo arkay inay tahay mid muhiim ah.
Maaliyaddu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aad la macaamili doonto inta ka dhiman noloshaada. Ma aqaan sida loo maareeyo waxay noqon doontaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee aad wajihi doonto sida qof dhallinyaro ah haddii aadan lahayn aqoon iyo xirfad habboon oo looga baahan yahay maareynta maaliyaddaada gaarka ah.
Cilmi -baaris ay sameeyeen Golaha Waxbarashada Dhaqaalaha ee sahanka 2020 ayaa muujisay in gudaha Mareykanka, 21 gobol oo kaliya ay u baahan yihiin in ardayda dugsiga sare ay qaataan koorso maaliyadeed oo shaqsiyeed si ay u qalin jabiyaan.
Si aad si sax ah u maamusho dhaqaalahaaga, waxaad u baahan tahay inaad akhrido buugaagta saxda ah ee kuu iftiimin kara oo kaa caawin doona hubinta inaadan kharash garaynin inaad ka shallaayi doonto sanadaha soo socda.
Buuggan waa #1 liiskaan sabab. Waxaa qoray Cary Siegel oo jabaya dhinaca lacagta waa inaad ku ogaataa 99 mabaadi'da iyo siddeed cashar oo lacag ah qof walba waa inuu ogaadaa.
Si aad si fiican ugu maareyso dhaqaalahaaga shaqsiyeed, waa inaad runtii akhridaa buuggan.
Buuggan waxaa markii hore loogu talagalay shantiisa carruur ah markii uu ogaaday inaysan baran mabaadi'da maaliyadeed ee muhiimka ah ka hor inta aysan gelin dunida dhabta ah, laakiin wuxuu ku koray si wanaagsan oo dib loo eegay oo ay ka buuxaan casharro lacag ah, iyo sidoo kale waayo-aragnimo iyo talo-bixin Siegel .
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna akhriska wanaagsan ee burburin doona waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato maareynta dhaqaalahaaga shaqsiyeed.
Buuggu wuxuu caddeeyay inuu aad ugu doodayo muhiimadda akhris -qoraalka maaliyadeed, madaxbannaanida maaliyadeed, iyo dhisidda maalka iyada oo la maal -gelinayo hantida, maal -gelinta hantida maguurtada ah, bilaabidda iyo lahaanshaha meheradaha, iyo sidoo kale kordhinta garaadka maaliyadeed ee qofka.
Buugga, wuxuu si taxaddar leh u baray wixii uu ka koray aabbihiis iyo saaxiibkiis aabbihiis, kan dambe waa “aabbaha hodanka ah” ee cinwaanka ku jira.
Casharradaas waxaa ka mid ah sida aadan ugu baahnayn inaad lacag badan u samayso si aad u taajirto, u qeex hantida iyo deymaha, oo u sharax waalidiinta sababta dugsiyadu aanay u bari doonin carruurtaada waxa ay u baahan yihiin inay ka ogaadaan dhaqaalaha shakhsi ahaaneed.
Kani waa mid ka mid ah buugaagta maaliyadeed ee ugu wanaagsan ee bilowga ah.
Haddii aad dhib ku qabto maareynta deyntaada si wax ku ool ah, buuggan waa in la akhriyo.
Buuggu waa iibiyaha New York Times waadna sheegi kartaa inay taasi u qalanto maxaa yeelay waxay ku sharraxaysaa ereyo aad u cad, sida looga baxo deynta oo loo hagaajiyo sawirkaaga maaliyadeed iyadoo laga fogaanayo dabinnada caadiga ah sida kiraysiga-lahaanshaha, horumarka lacagta, ama isticmaalka credit.
Buuggani waa iibiyaha kale ee ugu wanaagsan New York Times. Waa buug maaliyadeed oo ay ku jiraan macluumaad la cusbooneysiiyay oo ku saabsan canshuuraha, maalgashiga, teknoolojiyadda, iyo barnaamijyada si otomaatig loogu sameeyo noloshaada maaliyadeed.
Buuggu wuxuu ku bilaawday sheekada lamaane qaata $ 55,000 oo la isku daray sanadkiiba, iyo sida ay ku gaareen riyooyinkoodii dhaqaale.
Miyaad qiyaasi kartaa inaad leedahay laba guri, inaad carruurtaada dhigato kulliyad, oo aad ka fariisato 55 oo leh $ 1 milyan oo ukun buul ah oo hawlgab ah.
Buuggan waxaa loo sameeyay inuu ku baro sida tan si wax ku ool ah loo sameeyo.
Buuggani wuxuu caan ku yahay oo keliya aqoonta uu gudbinayo, laakiin sidoo kale waa qaabka uu farriinta u gudbiyo. Broke Millennial waxay qaadataa wacdinta caadiga ah iyo ka-bixitaanka casharrada lacagta waxayna ku beddeshaa kaftan, naxariis, iyo madadaalo.
Astaantani waxay ka dhigaysaa buugga il il kaliya ma aha ee waxay kaloo ka dhigaysaa akhris fudud.
Markaad akhrinayso buuggan, waxaad gacanta ku hayn kartaa dhaqaalahaaga gaarka ah. Laga soo bilaabo fahamka xiriirkaaga lacagta ilaa maareynta amaahda ardayga ilaa wadaagista faahfaahinta dhaqaalahaaga lamaane, buugani wuxuu daboolayaa caqabadaha ugu weyn ee lacagta ee wajahaya kumanaan sannadood maanta.
Wareer marka ay timaado lacagtaada, ha ahaato sida si habboon loo maalgashado ama sida loola tacaalo caqabadaha maaliyadeed ee lama filaanka ah? Carl Richards '' Qorshaha Maaliyadeed ee Hal-Bogga '' wuxuu ka qaadaa qarsoodiga sida ugu habboon ee loo maareeyo dhaqaalahaaga.
Buugani wuxuu kaa caawinayaa kaliya inaad ogaato waxa ahdaaftaada maaliyadeed, laakiin sidoo kale sidaad halkaas ugu tagi lahayd qorshe fudud, hal bog ah. Richards waa Qorsheeye Maaliyadeed oo La Xaqiijiyay iyo Qoraa u shaqeeya New York Times.
Kani waa buugaag kale oo maaliyadeed shaqsiyeed oo ugu fiican bilowga.
Akhri: Shirkadaha Maaliyadeed ee Shaqsiyadeed ee ugu sarreeya 2021
Haddii aad tahay qof dhallinyaro ah oo hami leh, laakiin murugo leh, oo aan waxba ka ogeyn siyaabo ka wanaagsan oo aad u maareyn karto dhaqaalahaaga shaqsiyeed, buuggani waa mid adiga lagaa rabo inaad akhrido.
Buugani wuxuu barayaa in hadafka taajirnimadu aanay ahayn in aanad ku bixin lacagtaada, laakiin aad u isticmaasho lacagta si xikmad leh. Buuggu wuxuu si taxaddar leh u sharraxayaa sida aad u isticmaali karto lacagtaada, eed la'aan, illaa intaad maalgashatay oo aad si habboon u qoondeysay.
Daabacaaddii ugu dambaysay ee buugga ayaa soo cusboonaysiisay aragtiyo ku saabsan tiknolojiyadda, lacagta, iyo cilmi -nafsiga, iyo sidoo kale qaar ka mid ah sheekooyinka guusha ee akhristayaasha oo runtii hodan ka noqday akhrinta buuggan gaarka ah.
Xaqiiqdii ma jirto si aad u akhrido Maaliyadda Gabdhaha Xariifka ah oo aadan rabin inaad gaarto madaxbannaanida maaliyadeed. Waxaad aad ugu diyaar garoobi lahayd inaad noqoto khabiir xagga lacagta ah, oo u maamula lacagtaada sidii madax.
Buuggani wuxuu ujeeddadiisu tahay in la xoojiyo oo la baro dhammaan jiilka cusub ee haweenka, isagoo ka dhawaajinaya waxyaabo ay ka mid yihiin sidii isha loogu hayn lahaa kharashaadka, loo abuuri lahaa oo loogu dhejin lahaa miisaaniyad, loo maareyn lahaa sumcaddaada, loo dhisi lahaa ukun buul, loona qaadan lahaa mas'uuliyadda dhaqaalahaaga wanaagsanaansho.
Cilmu -nafsiga lacagtu wax yar bay ka weecataa waxa ay dhammaan buugaagta kale bixiyaan. Waxay ujeedadeedu tahay maskaxda, iyada oo la beegsanayo sida aad u malaynayso, fikradahaaga hore, iyo xitaa kibirkaagu waxay saameyn ku yeelan karaan go'aamadaada ku saabsan lacagta.
Kaliya kuma tilmaamayso sida ay kuwani u saameeyaan dhaqaalahaaga, laakiin waxay sidoo kale ku siinayaan talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loola dagaallami karo cilmi -nafsigaan saameeya maskaxdaada xagga dhaqaalahaaga gaarka ah.
Iyada oo in ka badan hal milyan oo nuqul la iibiyey, Vicki Robin's “Lacagtaada ama Noloshaada” ayaa dejisa qorshe si sahlan loo raaci karo, sagaal tallaabo ah si looga caawiyo akhristayaasha inay beddelaan xiriirkooda lacag.
Buuggani wuxuu si cad u qeexayaa sida daynta looga bixi karo, sida aad u bilaabi lahayd maalgelinta iyo maal -gelinta ay tahay inaad fiiriso, sidaad u kaydin lahayd lacagtaada oo aad u dhisi lahayd caadada badbaadinta iyo sida dhammaan talooyinkani ay gacan uga geysan lahaayeen dhisidda maalkaaga.
Buugani wuxuu kaa caawin doonaa inaad garatid waxa lacagtu adiga kuu tahay, inta kugu filan, iyo sidaad ku gaari lahayd madaxbannaanida maaliyadeed.
Buuggani wuxuu noqon karaa mid indho-furan oo cajiib ah, gaar ahaan dadka yaryar iyo qoysaska hadda bilaabanaya. Isku -darka xogta iyo aragtiyaha khabiirnimada, “Milyaneerka Xiga ee xiga” wuxuu daaha ka qaadaa runta waxa milyaneerku runtii u eg yahay oo laga yaabo inaysan ahayn waxaad filaysay.
Buugani wuxuu ku bari doonaa aasaaska ku saabsan noqoshada milyaneer. Markaad akhrinaysid, waxaad baran doontaa inaad ku qarashgareyso wax ka yar waxaad sameyso adoo ku noolaan kara awoodaada, lacag keydiso bil walba, iska ilaali amaahda aadan qorsheyn sida ugu wanaagsan ee loo bixin karo, iyo sida qarashka yar u hubin karo in canshuurahaagu sidoo kale hooseeyo.
Buuggani waa mid loo baahan yahay in loo akhriyo si loo maareeyo maaliyaddaada gaarka ah haddii aad tahay qof bilow ah.
Markaad carruurtaada siiso buuggan, waxaad xaqiijin kartaa inaad kaalin muhiim ah ka qaadatay sidii aad iyaga uga caawin lahayd inay horumariyaan oo kobciyaan caadooyinka lacagta wanaagsan goor hore oo ay fahmaan dhibaatooyinka adag ee maareynta lacagta markay korayaan.
“Korinta Dhaqaale -yaqaanka Carruurta” waxay dabooshaa siyaabaha waxbarashada maaliyadeed ay uga caawin karto carruurta inay gaaraan riyooyinkooda oo ay noqdaan kuwo kalsooni badan leh, iyo sidoo kale fikradaha sida joogtaynta maaliyadeed iyo bixinta samafalka.
Buugani wuxuu isku waafajinayaa shanta marxaladood ee koritaanka-carruurta, kurayda, dugsiyada dhexe, dugsiyada sare, iyo 20-wax; oo leh halbeegyo waxbarasho maaliyadeed, sidaa darteed mabaadi'diisu waxay waxtar u yeelan kartaa waalidiinta carruurta leh da 'kala duwan.
Sida cinwaanka si sax ah u qeexayo, buuggani wuxuu ku saabsan yahay maalgashiga. Waxay ku bari doontaa xeelado sida ugu wanaagsan ee si guul leh loogu qiimeeyo maalgelinta suuqa saamiyada.
Buuggan waa mid adiga lagaa rabo inaad akhrido haddii aad ku cusub tahay maalgashiga oo aad isku deyeyso inaad ogaato habka ugu wanaagsan ee aad ku hirgelin karto. Benjamin Graham wuxuu si faahfaahsan u sharraxayaa falsafadiisa ah maalgelinta qiimaha, taas oo maalgashadayaashu doortaan kaydka u muuqda inay ka ganacsanayaan wax ka yar qiimahooda gaarka ah.
Waa mid ka mid ah buugaagta maaliyadeed ee ugu fiican ee bilowga ah.
Cilmi -baaristu waxay muujisay in haweenku aysan si joogto ah u maalgelin sida ragga, Buuggan si taxaddar leh laakiin si adag u go'doomiya una weerara caqabadaha hor taagan.
Buugga Finn wuxuu bixiyaa dulmar guud oo ku saabsan caqabadaha iyo duruufaha maaliyadeed ee gaarka ah ee haweenku la kulmaan ka hor inta aysan u leexan shan tallaabo si ay ugu guuleystaan ​​maalgelinta haweenka.
Kuwaas waxaa ka mid ah maalgelinta kaydka muddada dheer, qoondaynta hantida, iyo isu -dheelitirka faylalka si joogto ah.
Haddii aad tahay qof dumar ah, oo raadineysa inaad jebiso caqabadaha bulshada oo aad gaarto xorriyadda maaliyadeed, buuggan waa in la akhriyo.
Buuggan, Grant Sabatier wuxuu kula wadaagayaa istiraatiijiyadihii uu kaga tegi lahaa 24 jir wuxuuna jebiyey inuu yeesho hanti ka badan $ 1.25 milyan shan sano gudahood buuggiisa.
Buuggani wuxuu bixiyaa hagitaan tallaabo-tallaabo ah si aad u gaarto yoolalkaaga maaliyadeed, wax kasta oo ay noqon karaan.
Geedi socodku wuxuu u badan yahay inuu ku lug yeesho xoogaa hal-abuurnimo iyo fekerka sanduuqa ka baxsan, laakiin taladiisu sidoo kale waa mid wax ku ool ah oo la maareyn karo.
Wuxuu daboolayaa mowduucyo ay ka mid yihiin buuqa dhinac, wada xaajoodyada loo -shaqeeyaha, iyo istaraatiijiyadda maalgashiga, iyada oo ahdaafta ugu dambeysa ee ah in la abuuro waqti dheeri ah oo lagu sameeyo waxa aad jeceshahay.
Su'aalaha Badiya La Weydiiyo Buugaagta Maaliyadda Shaqsiyeed ee Ugu Fiican Bilowga
Ma inaan akhriyaa buugaagtaan si aan si habboon ugu maareeyo dhaqaalahayga?
Maya. Haddii aad si habboon u adeegsan karto hababkaan kale, uma baahnid inaad akhrido buug si aad si habboon ugu maareyso maaliyaddaada.
Waa maxay buugga maaliyadeed ee ugu fiican?
Maxay Dugsigan Wax iigu Bar Waayeen? iyo Aabbaha hodanka ah, Aabbaha saboolka ah waa buugga maaliyadeed ee ugu fiican ee aad akhrin karto 2021.
Ma la xiriiri karaa dhacdooyinka ku jira buugaagtan maaliyadeed ee shaqsiga ah?
Waxaad tahay bilaw. Waxay u badan tahay inaysan macno kuu lahayn marka hore. Kadib markaad are si aan u dhigo aragti ahaan, wax walba ayaa kuu caddaan lahaa.
Akhriska kaliya hal buug maaliyadeed oo shaqsiyeed ma ku filan yahay?
Intee in le'eg ayay igu qaadan doontaa inaan akhriyo dhammaan buugaagta maaliyadda?
Tani waxay ku xiran tahay adiga iyo sida aad diyaar ugu tahay inaad waxbarto. Waxa kale oo ay ku xidhan tahay inta aad tahay akhriste dhakhso badan
Xitaa haddii aad u malaynayso inaad taqaan inta badan waxa laga ogaado dhaqaalaha gaarka ah, mar walba waxaa jira wax cusub oo la barto. Waa muhiim inaad saldhiggaaga aqooneed ku haysato arimahan si joogto ah u koraya.
Furaha ayaa ah inaad qaaddo tallaabadaas koowaad. Aqoontu waa awood waxayna kaa caawin kartaa inaad gaarto go'aanno maaliyadeed oo caqli badan. Lacagtu malaha wax kama qabato dhammaan arrimaha nolosha laakiin dhab ahaantii waxay wax ka qabataa inta badan.
Waxaan rajaynayaa in buugaagtan maaliyadeed ee ugu fiican ay kaa caawin doonaan inaad hesho aqoonta aad ugu baahan tahay dhaqaalahaaga shaqsiyeed oo aad noloshaada lacag badan ka qaadato.
waxaa Pin 3